Kosoe Gyi on Flipboard
175 Flips |6Magazines | 1 Follower | @kosoegyi75 | Keep up with Kosoe Gyi on Flipboard,aplace to see the stories, photos, and updates that matter to you. Flipboard createsapersonalized magazine full of everything, from world news to life’s great moments. Download Flipboard for free and search for “Kosoe Gyi”
ကွမ်းထောင်ကိုင် ပန်းထောင်ကိုင် ကောင်မလေး များနှင့်အတူ ဝတ်မှုရွှေရည် လှချင်တိုင်းလှနေပါတော့သည်။
ဆောင်းဦးလည်းရောက်ပြိ နှင်းတွေလည်းဝေနေပြိ အအေးဓါတ် လည်းပိုလာပါပြိ နွေးနွေးထွေးထွေး နေလို့ ကောင်းတဲ့အချိန် ရာသိအကူးအပြောင်း မှာ ကျန်းမာရေး အထူးဂရူပြုကြစေလို။
အရမ်းအသက်ဝင်တဲ့ ပန်ချိကားတချပ် ကျနော်ကတော့ "ရွာအဝင်လမ်း" လို့ အမည်ပေးထားပါတယ် ။
HWH For Android
အားမလိုအားမရ စိတ်ညစ်စရာ စိတ်ပျက်စရာတွေ ဘေးဖယ်ပြီး မင်္ဂလာရှိသောနေ့ သစ်ဆီသို့ ဖြတ်သန်းသွားကြရအောင်သူငယ်ချင်းတို့ ရေ။
27th SEA Games Day 11 - Karatedo Highlight
• Easy Chicken Recipes<br>• Chicken Cordon Bleu<br>• Grilled Chicken Salad<br>• Homemade Chicken Salad<br>• Chicken Curry Recipe<br>• Chicken Breast Recipes<br>• Healthy Chicken Salad …
တိုင်းပြည် ရဲ့စပါးကျီ ကိုတဖက်တလှမ်းမှ တာဝန်ယူထားရသော မြန်မာ့လယ်သမား ထဲမှ လယ်သမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ယခု ဓါတ်ပုံကို နိူင်ငံခြား Wedsite တစ်ခုမှယှူ အသုံးပြူထားတာပါ။ မြန်မာ ကိုချစ်သူတိုင်း Like & Share ပြူလုပ်ပေးကြပါ။